Saameynta roobabka,shir jaraa’id oo ay qabatey wasiir ku xigeenka war-faafinta DDS. - Hargeele - Wararka Somali State
Shir jaraa’id oo ay ku qabatey xafiiskeeda wasiir ku xigeenka warfaafinta DDS marwo. Hibo Axmed Cumar, ayaa waxa ay kaga hadashey khasaaraha ka dhashey roobab laxaad leh oo dhawaan ka da’ey meelo badan oo deegaanka ka mid ah.
Waxaa ay sheegtey in sagaal qof ay ku geeriyoodeen dhibaatada ay gaysteen roobabkaasi, laba ka mid ah dadkaasi waxa ay ku dhinteen gobolka Faa-fan, halka ay 7da kalena ku dhinteen gobolka Afdheer.
Waxa ay intaas ku dartey in dad badani ay ku barakaceen fatahaadaha ay keeneen roobabkaasi, gobolka Af-dheer waxaa ku barakacey 575 qoys, halka ay gobolka Shabeelana ku barakaceen 7348 qoys, waxaa kale oo uu saameeyey 4350 hektor oo dhul beereed ah.
Waxa ay wasiiradu intaas sii raacisey in ay dawalda deegaanku ay dadkaas gaadhsiiyey deeqo isugu jira cunto, daawo, dhar iyo agab kale oo kala duwan.
Ugu danbeyn waxa ay ugu baaqdey dadka degan meelaha hooseeya, dooxyada iyo wabida agtooda in ay ka digtoonaadaan fatahaado ka dhalan kara roobabka wali da’aya.
LAYAAB: Koox ka ciyaarta Premier League oo u diyaarsaneysa 210 milyan euro si ay kaliya u hesho Neymar
Khudbadihii laga jeediyey xafladii gudoonsiinta RW Abiy bilada nabada.
Tababar ku saabsan kobcinta awooda wariyayaasha oo maanta lagu qabtey xarunta wasaarada warfaafinta DDS.